Thwebula CopyTrans Control Center 4.100 – Vessoft
WindowsI-MultimediaIfoniCopyTrans Control Center
Ikhasi elisemthethweni: CopyTrans Control Center
CopyTrans Control Center – isofthiwe thwebula futhi ubuyekeze zokusebenza ze iPhone, iPad noma iPod. CopyTrans Control Center ikuvumela ukulanda isofthiwe ezilandelayo: CopyTrans, CopyTrans Oxhumana, CopyTrans Photo, CopyTrans Manager, CopyTrans TuneSwift njll Isofthiwe kwenza ukuthumela imibiko iphutha futhi enze i okuzenzekalayo. CopyTrans Control Center ngezikweletu sakugcina system imithombo futhi evelelwa okulula ukuyisebenzisa interface.
Download nokubuyekeza zokusebenza for iPhone, iPod noma iPad
Isethi software ewusizo
Thumela umbiko bug
Thwebula CopyTrans Control Center
Amazwana ku CopyTrans Control Center
CopyTrans Control Center software ehlobene
Isofthiwe synchronizes computer yakho namadivayisi Samsung yenkampani. It has amathuba abanzi ukusebenza namadivayisi futhi isekela izinhlobo ezahlukene uxhumano.
UClementine – umdlali olungele ukudlala kabusha amafomethi athandwayo. Isoftware ikuvumela ukuthi ukopishe umculo kumadivayisi aphathwayo futhi ulalele izinsizakalo zomsakazo ezidumile.
I isofthiwe ukusebenza ngamafayela abezindaba. Iqukethe amathuluzi ukuhlela izithombe, amafayela alalelwayo bese wengeza imiphumela ehlukahlukene kumavidiyo.
I-K-Lite Codec Pack – iqoqo lama-codecs ukuze abuyisele amafomathi wesimanje amafayili alalelwayo nevidiyo. Isoftware inikezela ukuhambelana phakathi kwama-codecs futhi inika amandla ukuhlela ukucushwa kwawo.
Ukusesha Okuningana Nokufaka Okuphindwayo – isoftware yakhelwe ukusesha nokufaka okunye esikhundleni sombhalo ngamafomethi wefayela le-Microsoft, i-Open Document, i-PDF, amafayela wekhasi lewebhu agcinwe kanye namafomethi ahlukahlukene wokugcina umlando.
I-Adaware Antivirus Free – i-antivirus ne-antispyware ohlelweni olulodwa lokuvikelwa kwezindlela ezimbili ngokumelene nokusongelwa kwegciwane okuthandwa kakhulu nezinhlobo ezahlukahlukene ze-malware.
Isofthiwe zokudlulisela fast amafayela ezinhlobo noma ezinobukhulu obuhlukahlukene. Isofthiwe isekela exchange of idatha phakathi kumadivayisi multiple kanye computer kanyekanye.